US နှင့် UK တွင် အရေပြားကင်ဆာ နှုန်းများ သိသိသာသာ မြင့်တက်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်- အသားဆေး အလှပြင်ဆိုင်များကို ဖယ်ရှားရန် အချိန်တန်ပြီ ။ - အခြေအနေများ 2022
US နှင့် UK တွင် အရေပြားကင်ဆာ နှုန်းများ သိသိသာသာ မြင့်တက်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်- အသားဆေး အလှပြင်ဆိုင်များကို ဖယ်ရှားရန် အချိန်တန်ပြီ ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် အဖြစ်များဆုံး ကင်ဆာပုံစံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရသော အရေပြားကင်ဆာသည် နေရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့မှု မြင့်မားသော အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအတွက် အဓိကကျသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်စရာတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။ United Kingdom ရှိ ရေကန်တစ်ဝိုက်တွင် အရေပြားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနှုန်းမှာလည်း သမိုင်းဝင် မြင့်မားလာခဲ့သည်။ Cancer Research UK မှတင်ပြသောစာရင်းအင်းများအရ UK ရှိလူများအကြားအရေပြားကင်ဆာဖြစ်ပွားနှုန်းသည် 1970 ခုနှစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လက်ရှိတွင်ငါးဆပိုမိုမြင့်မားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ကိန်းဂဏာန်းများသည် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်သည်- အသားအရောင် တောက်ပြောင်နေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ စွဲလမ်းမှုသည် အမှန်တကယ်ပင် တန်ဖိုးရှိပါသလား။
Cancer Research UK ၏အချက်အလက်များထုတ်ပြန်ပြီးနောက်၊ malignant melanoma သည်ယခုအခါဗြိတိန်တွင်ပဉ္စမမြောက်အဖြစ်အများဆုံးကင်ဆာပုံစံဖြစ်သည်။ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် တစ်နှစ်လျှင် လူ ၁၃,၀၀၀ ကျော်သည် ကင်ဆာဆဲလ်များ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ အရေပြားကင်ဆာရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိသူ ၁၀ ဦးတွင် ရှစ်ဦးသည် အဆိုပါရောဂါမှ လွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း ကင်ဆာဆဲလ်များသည် နှစ်စဉ်သေဆုံးသူ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ နေသာသောဥရောပဒေသများသို့ အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးထွက်ခြင်းနှင့် အသားအရောင်အသားဝါသောအိပ်ရာအသုံးပြုမှု သိသိသာသာမြင့်တက်လာခြင်းသည် melanoma ဖြစ်နိုင်ခြေကို တိုးပွားစေသည့် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည်။
"၁၉၇၀ ခုနှစ်များ အလယ်ပိုင်းလောက်ကတည်းက UK မှာ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ ယနေ့ခေတ်မှာ အဖြစ်အများဆုံး ကင်ဆာ ၁၀ မျိုးထက် ပိုများလာတယ်" ဟု Cancer Research UK မှ စာရင်းအင်းအကြီးအကဲ Nick Ormiston-Smith က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပူပြင်းသော ရာသီဥတုတွင် အားလပ်ရက်များ ဖြစ်လာပါသည်။ စျေးပိုသက်သာပြီး နေခင်းအိပ်ရာတွေကို 1970 ခုနှစ်များကတည်းက ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ ရရှိနိုင်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် နေရောင်ကနေ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် လွန်ကဲစွာ ထိတွေ့မှုဟာ အရေပြားကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။”
ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဗဟိုဌာန၏ အဆိုအရ၊ 2010 ခုနှစ်တွင် US တွင် လူ 61, 061 ယောက်သည် အရေပြား melanoma ရှိကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်အတွင်းတွင် လူ 9, 154 ယောက်သည် ၎င်းတို့၏ melanoma ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကြောင့် သေဆုံးခဲ့သည်။ 2001 ခုနှစ်မှ 2010 ခုနှစ်အတွင်း အရေပြားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းသည် အမျိုးသားများတွင် တစ်နှစ်လျှင် 1.6 ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အမျိုးသမီးများတွင် တစ်နှစ်လျှင် 1.4 ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ UK ကဲ့သို့ပင်၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့် ဆယ်ကျော်သက် နှစ်ဦးစလုံးတွင် အသားအရောင်ခြယ်သည့် အိပ်ယာအသုံးပြုမှုသည် နှစ်စဉ် အရေပြားကင်ဆာရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိသူအရေအတွက်တွင် ၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍမှ ဆက်လက်ပါဝင်နေပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဆယ်ကျော်သက် ၂.၃ သန်းကျော်သည် အသားဆေးအိပ်ရာကို အသုံးပြုကြောင်း ဝန်ခံကြသည်။
မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကင်ဆာသုတေသနအဖွဲ့မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် အသားအရောင်အသားဝါသော အိပ်ရာကို အသုံးပြုခြင်းသည် melanoma အန္တရာယ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် နိုင်ငံတကာ လေ့လာမှု 19 ခု ပါဝင်ပါသည်။ အမျိုးသားရော အမျိုးသမီးပါ အသက်အရွယ်အုပ်စုအားလုံး အပါအဝင်၊ အသားအရောင်ခြယ်တဲ့ အိပ်ယာအသုံးပြုသူတွေဟာ အရေပြားကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာပါတယ်။ အသက် 35 နှစ်မတိုင်ခင် အသားအရောင်ခြယ်တဲ့ အိပ်ရာကို အသုံးပြုသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အန္တရာယ်ကို 75 ရာခိုင်နှုန်းအထိ မြင့်တက်စေပါတယ်။ သုတေသနသည် လူများကို နေလောင်ခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် ကူညီပေးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ ပေးစွမ်းသည်ဟု ဆိုကြသော အသားအရောင် အလှပြင်ဆိုင် ဝါသနာအိုးများကို ဆန့်ကျင်ရန် ရည်ရွယ်သည်။
"နောက်ဆက်တွဲ နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကြောင့် အရေပြားပျက်စီးခြင်းမှနေကာအိပ်ယာအသုံးပြုခြင်း၏ သက်သေအထောက်အထားများသည် လုံခြုံသောအသားရောင်ကဲ့သို့ အရာမျိုးမရှိပါ" ဟု IARC လုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ Beatrice Secretan က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။. "အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူငယ်များသည် အိမ်တွင်းအရောင်ဖျော့ဖျော့ဖျော့သုံးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုခြင်းမှ တွန်းအားပေးသင့်ပြီး အရွယ်မရောက်သေးသူများ နေကုတင်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားရန် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါသည်။"
Covid19 ကုသရေး? ဤဆေးပြားသည် ရောဂါလက္ခဏာများကို ကုသနိုင်ပြီး လူနာများအား 'ပုံမှန်ဘဝ' သို့ ပြန်သွားရန် ကူညီပေးသည်
ယခုအခါ ကျွမ်းကျင်သူများသည် COVID-19 လူနာများကို ကုသပေးနိုင်မည့် ဆေးအသစ်ကို ရှာဖွေနေပါသည်။